ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြား အတှကျ - ApannPyay Media
ပိုကျဆံ စုတယျ ဆိုတာ ရညျမှနျးခကျြ တဈခု ထားပွီး ရရှေညျ တညျဆောကျ ထားသငျ့တဲ့ အလအေ့ကငျြ့ တဈခုဖွဈပါတယျ… ။ ငှကွေေး အောငျမွငျမှုမှာ ပိုကျဆံ ဘယျလောကျ ဝငျတယျ ဆိုတာထကျ ဘယျလောကျ စုနိုငျတယျ ဆိုတာက ပိုအရေးကွီးပါတယျ… ။
လူတှကေ မဝငျသေးတဲ့ ပိုကျဆံကို မြှျောကိုးပွီး အကွှေး ယူတတျကွတယျ… ။ ဒါက အဓိက မှားယှငျးနတေဲ့ အခကျြပဲ… ။ ကြှနျတျောတို့တှေ ပိုကျဆံစုနတေဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလို ဗြူဟာတှေ သုံးရမလဲဆိုတာ အခကျြကကြ တငျပွခငျြပါတယျ. . . ။ ။
၁။ သုံးပွီးမှ မစုလနေဲ့…
လစာထုတျတာနဲ့ လိုခငျြတဲ့ပစ်စညျးတှကေို ဝယျပွီးမှ ပိုကျဆံ စုတတျကွတယျ ။ တကယျတမျးတော့ လစဉျ စုဆောငျးမယျ့ ပိုကျဆံပမာဏကို သတျမှတျစုဆောငျးပွီးမှသာ လိုအပျတဲ့အရာတှကေို ဝယျသငျ့ပါတယျ ။
လစာထုတျတာနဲ့ ပထမဆုံးလုပျရမှာက စုဆောငျးမယျ့ ပိုကျဆံကို သီးသနျ့ ခနျြထားသငျ့ပါတယျ ။
၂။ တံဆိပျစှဲ မထားလနေဲ့…
ဆယျသိနျးလောကျရှိတဲ့ ( i P h o ne) ဝယျမယျ့အစား အတနျအသငျ့ သုံးလို့ကောငျးတဲ့ နှဈသိနျးတနျ စမတျဖုနျး တဈလုံးကို ဝယျပွီး ကနျြတဲ့ ရှဈသိနျးကို စုဆောငျးလိုကျတာက ပိုအဓိပ်ပာယျ ရှိပါတယျ ။
နာမညျကွီး တံဆိပျရဲ့နောကျမှာ လိုကျနတောထကျ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ ပစ်စညျးကို သုံးသငျ့တဲ့ သဘောပါ ။
ဆိုငျ ထိုငျမယျဆိုရငျ နာမညျကွီးဆိုငျမှာ ထိုငျတာထကျ အစားအသောကျကောငျးတဲ့ ဆိုငျမှာ ထိုငျတာက ပိုအရသာရှိသလို ငှကေုနျလညျး သကျသာစပေါတယျ ။
၃။ အသေးအဖှဲလေးတှကေို ဂရုစိုကျပါ…
အအေးဘူး ဝယျသောကျလိုကျလို့ ငါးရာပဲကုနျတာ တဈခါတလမှော ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ ကွိမျဖနျမြားလာရငျ “ ဆိတျဖနျမြား အနာဖွဈ ” တတျပါတယျ ။
ဥပမာ – စတိုးဆိုငျတှကေ ပေးလိုကျတဲ့ ကွှတျကွှတျအိတျတှကေို လှငျ့မပဈဘဲနဲ့ အမှိုကျထညျ့တဲ့ အိတျလုပျမယျဆိုရငျ အမှိုကျအိတျကုနျငှေ သကျသာတဲ့သဘောပါ ။
၄။ နှဈပတျစောငျ့တဲ့ ဗြူဟာသုံးကွညျ့ပါ…
ပစ်စညျးတဈခု ဝယျခငျြတယျဆိုရငျ ခကျြခငျြး မဝယျသေးပါနဲ့ဦး ။ နှဈပတျလောကျ စောငျ့လိုကျပါ ။ နှဈပတျလောကျကွာတော့မှ ကိုယျကလညျး တကယျ လိုခငျြတယျနတေယျ ၊ ပစ်စညျးကလညျး လိုအပျနတေယျဆိုတော့မှ ဝယျလိုကျပါ ။
စောငျ့နတေဲ့ အတောအတှငျးမှာ တခွားလူဝယျလို့ ကုနျသှားမှာ စိတျမပူပါနဲ့ ။ ပိုကောငျး ပိုလှတဲ့ ပစ်စညျးတှေ ဆိုငျမှာ ရောကျနပေါပွီ ။
၅။ အငျတာနကျ လြော့သုံးပါ…
ကိုယျ့အလုပျဟာ အငျတာနကျ နဲ့ မသကျဆိုငျဘူးဆိုရငျ တဈနမှေ့ာ တဈနာရီထကျ ပိုမသုံးပါနဲ့ ။ အငျတာနကျ ကို ရိုးရိုးသုံးတာထကျစာရငျ ။
၆။ လိုအပျတာလား လိုခငျြတာလား…
လူတှဟော ကိုယျ့အတှကျ တကယျမလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုမှ လိုခငျြနမေိတတျတယျ ။ “ မလိုအပျတဲ့အရာတှကေို ဝယျမိရငျ လိုအပျတာတှေ ထုတျရောငျးရမယျ ” ဆိုတဲ့ ဝါရငျ့ဘနျ့ဖတျရဲ့ စကားအတိုငျးပဲ ဆန်ဒနောကျ မလိုကျမိပါစနေဲ့ ။
နောကျဆုံး အရေးကွီးတာက ပိုကျဆံစုတဲ့အခါမှာ ရညျမှနျးခကျြထားပွီး စုတတျဖို့ပဲ ။ ရညျမှနျးခကျြထားပွီး ပိုကျဆံစုတာက ပိုအဓိပ်ပာယျရှိသလို ပနျးတိုငျသတျမှတျပွီး လြှောကျလှမျးတဲ့ ဘဝဟာ အနှဈသာရ ပွညျ့ဝနတောပေါ့
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက်
ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည်ဆောက် ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်… ။
လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေး ယူတတ်ကြတယ်… ။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်ပဲ… ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျ တင်ပြချင်ပါတယ်. . . ။ ။
၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့…
လစာထုတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ပြီးမှ ပိုက်ဆံ စုတတ်ကြတယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ လစဉ် စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံပမာဏကို သတ်မှတ်စုဆောင်းပြီးမှသာ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်သင့်ပါတယ် ။
လစာထုတ်တာနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံကို သီးသန့် ချန်ထားသင့်ပါတယ် ။
၂။ တံဆိပ်စွဲ မထားလေနဲ့…
ဆယ်သိန်းလောက်ရှိတဲ့ ( i P h o ne) ဝယ်မယ့်အစား အတန်အသင့် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ နှစ်သိန်းတန် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကို ဝယ်ပြီး ကျန်တဲ့ ရှစ်သိန်းကို စုဆောင်းလိုက်တာက ပိုအဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ် ။
နာမည်ကြီး တံဆိပ်ရဲ့နောက်မှာ လိုက်နေတာထက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို သုံးသင့်တဲ့ သဘောပါ ။
ဆိုင် ထိုင်မယ်ဆိုရင် နာမည်ကြီးဆိုင်မှာ ထိုင်တာထက် အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ထိုင်တာက ပိုအရသာရှိသလို ငွေကုန်လည်း သက်သာစေပါတယ် ။
၃။ အသေးအဖွဲလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ…
အအေးဘူး ဝယ်သောက်လိုက်လို့ ငါးရာပဲကုန်တာ တစ်ခါတလေမှာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကြိမ်ဖန်များလာရင် “ ဆိတ်ဖန်များ အနာဖြစ် ” တတ်ပါတယ် ။
ဥပမာ – စတိုးဆိုင်တွေက ပေးလိုက်တဲ့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေကို လွှင့်မပစ်ဘဲနဲ့ အမှိုက်ထည့်တဲ့ အိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အမှိုက်အိတ်ကုန်ငွေ သက်သာတဲ့သဘောပါ ။
၄။ နှစ်ပတ်စောင့်တဲ့ ဗျူဟာသုံးကြည့်ပါ…
ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း မဝယ်သေးပါနဲ့ဦး ။ နှစ်ပတ်လောက် စောင့်လိုက်ပါ ။ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မှ ကိုယ်ကလည်း တကယ် လိုချင်တယ်နေတယ် ၊ ပစ္စည်းကလည်း လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့မှ ဝယ်လိုက်ပါ ။
စောင့်နေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ တခြားလူဝယ်လို့ ကုန်သွားမှာ စိတ်မပူပါနဲ့ ။ ပိုကောင်း ပိုလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဆိုင်မှာ ရောက်နေပါပြီ ။
၅။ အင်တာနက် လျော့သုံးပါ…
ကိုယ့်အလုပ်ဟာ အင်တာနက် နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင် တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီထက် ပိုမသုံးပါနဲ့ ။ အင်တာနက် ကို ရိုးရိုးသုံးတာထက်စာရင် ။
၆။ လိုအပ်တာလား လိုချင်တာလား…
လူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် တကယ်မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုမှ လိုချင်နေမိတတ်တယ် ။ “ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်မိရင် လိုအပ်တာတွေ ထုတ်ရောင်းရမယ် ” ဆိုတဲ့ ဝါရင့်ဘန့်ဖတ်ရဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဆန္ဒနောက် မလိုက်မိပါစေနဲ့ ။
နောက်ဆုံး အရေးကြီးတာက ပိုက်ဆံစုတဲ့အခါမှာ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး စုတတ်ဖို့ပဲ ။ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး ပိုက်ဆံစုတာက ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသလို ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပြီး လျှောက်လှမ်းတဲ့ ဘဝဟာ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝနေတာပေါ့